Sahy | mandimby maharo
Sahy	Posted on 19 November 2012 by Mandimby Maharo	Zakariasy Patrick, Tangalamena sy mpanao politika. Ny fitsarana azy no nitana ny sain’ny mpanara-baovao nandritra iny herinandro iny. Notorin’ny Filoha Jeneralin’ny vondrona Sodiat ho nanala baraka azy manko izy raha nanambara fa ao ambadiky ny raharaha fanondranana andramena ity mpandraharaha akaikin’ny pitondrana tetezamita ity. Rehefa nohadihadin’ny zandary nandritry ny ora 4 izy dia nalefa teny amin’ny fitsarana. Niova indray avy eo ny baiko ka nentina teny amin’ny tobin’ny zandary teny Betongolo indray izy “mba ho fiarovana ny ainy”. Nivoaka ny Alatsinainy ary ny valin’ny fitsarana ka notanana eny amin’ny fonjan’Antanimora izy . Nambaran’ny didy fa hosoka ireo taratasy nentiny nanohanana ny fanambarana fa mpanondrana andramena ilay mpandraharaha.
Ny zavamisy aloha dia na voaporofo na tsia dia tsy azo takonana ny fisian’ny fanondranana andramena antsokosoko avy eto Madagasikara. Vitan’ingahy Zakariasy ny nanaitra ny vahoaka ka na dia voahidy eny amboniantsinanana aza izy dia milaza fa tratrany ny tanjony. Tsy ny amin’ny maha mpanao politika azy ihany no nanaovany iny anpamoaka iny fa noho izy tompon’ny tany sy mpiaro ny tanindrazana koa.
Raha ny fanondranana ny haren’ny firenenena malagasy tokoa manko dia tsy ny andramena ihany no anjakanjakan’ny mpanambola fa izay rehetra ahitana vola. Toy nizay hita ao Mandrosonoro , Faritra Amoron’ny Mania. Ny toerana fitrandrahana vatosoa indray no misy mamaritra ao ka itarainan’ny mponina.
Ny mpitondra any an-toerana dia mitaraina ihany koa. Ny ben’ny tatanan’ny Mandrosonoro, Andriaatoa Ralaiarison Eugene dia milaza fa tsy mahazo ny anjara hetra tokony ho azy ny kaominina hatramin’ny nitrandrahan’ireo mpandraharaha ireo ny vato tao amin’ny faritry ny tananana entiny.
Tags: politique, Vatosoa, ZakariasyCategories: Actralité, politique, societé